सेतो बीच बंगला - कोह रङ्ग आइल्याण्ड | आधिकारिक यात्रा गाइड
यो हप्ता मेरो श्रीमती र मैले सामान्यतया राम्रो समीक्षामा रहन निर्णय गरे सेतो बीच बंगला on कोह टच (मा मुख्य पर्यटक क्षेत्र Koh Rong).
व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ कि Koh टच को यो भाग धेरै उत्तम छ - एक 10mins को बारे मा नौका को दाहिने तिर जान्छ। हरेक पटक म यस क्षेत्रमा बस्छु, यो अपेक्षाकृत शान्त भएको छ र समुद्र तट सफा, राम्रोसँग राखिएको छ, र एक राम्रो परिस्थितिमा।
यो समय राउन्ड, सागर शायद मैले यो देखेको सबै भन्दा राम्रो थियो! पानी क्रिस्ट-क्लियर थियो, धूपमा चमक र यसको तल सेतो स्यान्डहरू प्रकट। समुद्रतट आफैले नरम, सफा र एक अवस्थामा थियो।
दिनभरि यो धेरै शान्त र आराम थियो। त्यहाँ केही मानिसहरू वरिपरि थिए तर यो साँच्चिकै व्यस्त भएन। रातको समयमा मैले दूरीमा बेहोश संगीत सुन्न सक्थे तर कोहि टचमा अन्य ठाउँहरूको तुलनामा यो निकै शान्त थियो र ईमानदार हुन यो वास्तवमा मेरो निद्रामा धेरै असर पर्दैन।
आवासको लागी, यो धेरै उचित थियो। बंगलाहरू तिनीहरूको लागि धैर्य महसुस छ तर राम्रो, सफा र आरामदायक छन्। प्रत्येक बेड मच्छर नेटको साथ आउँदछ र माथिको समयमा ठुलो सामान राख्न माथि एक फ्यान छ। रिसोर्टले 24 घण्टाको बिजुली छ त्यसो गर्दा तपाईंले राम्रो रातको निदा पाउन सक्नुहुनेछ बिना यो तातो नखोजी। बाथरूम आधुनिक, पश्चिमी थिए र एक राम्रो स्तरको गोपनीयता प्रदान गर्यो (यो भन्दा राम्रो हो कि बङ्गला आफैले आफैंलाई साझा गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि स्नान र शौचालय बीचको पैदल यात्रामा राखिएको छैन भने)।
मेरो लागि बसाइको हाइलाइट यो जागिरको कति सजिलो थियो, ढोका खोल्न, र सुन्दर समुद्र तट र सागर पानी बाहिर दाँया हुनुहोस्। बिहान चाँडो एक डुब्न साँच्चै यति ताजा छ - पानी तातो छ, सूर्य चमकिएको छ, र यो धेरै शान्त र आराम छ। मलाई थाहा छैन र तपाईं केवल $ 70 / रातको लागि यस्तो अद्भुत अनुभव कहाँ पाउन सक्नुहुनेछ!
रिसोर्ट को बार समुद्र तट मा सही छ, यसैले दिन को समयमा तपाईं आरामदायक कुर्सियों मा बैठ सकते हो र एक राम्रो ठंडी पेय संग आराम करो। पेय र खाना उचित मूल्य हो - शायद मात्र सिहानकुलेभिलमा भन्दा 25% अधिक महंगा। रातको समयमा तपाईं सबै बार्स र क्लबहरूमा छोटो हिँडाइ हुनुहुन्छ, त्यसैले यो संभवतः आदर्श स्थान हो कि Koh Touch का आनंद उठाउन।
सामान्यतया, म व्यक्तिगत रुपमा त्यहाँ बस्न सक्दिन र कोहा रङमा बस्ने कुनै पनि व्हाइट बीच बंगलालाई सिफारिस गर्नेछु।
गत वर्षमा द्वीपहरू छिट्टै छिटो परिवर्तन हुँदैछ, त्यसैले हामीले सोचेका छौं कि हामी 2018 मा Koh कोङको सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटहरू पुन: मूल्याङ्कन गर्दछौं र शीर्ष5को सूची बनाउँछौं। (अधिक गहराईको लागि ...
Koh Rong » ब्लग » होटल समीक्षाहरू » सेतो बीच बंगला
30 / 07 / 2018 in सर्वश्रेष्ठ होटल, विशेष लेख, होटल समीक्षाहरू